Yaa u maqan Soomaalida nolosha ka dhacday ee ku dhibaataysan Stockholm? | Somaliska
Isbuucii hore waxaan la kulmay koox Soomaali ah oo aan tiradooda ku qiyaasay 10-20 oo qamriga iyo daroogada ku isticmaalaya bartamaha Stockholm. Dadkaan oo isugu jiray ragg iyo dumar oo Af-Soomaali ku wada hadlaya ayaan markii aan u dhawaaday oo aan isku dayay in aan sawir ka qaado ayay aad u caroodeen iyagoo aflagaado iyo handadaad igu bilaabay. Si degdeg ah ayaan goobta uga baxsaday anigoo aysan ii suurto galin in aan ka wareysto xaalada ay ku suganyihiin. Balse waxaa ii suurto gashay in aan sawir ka qaado labo ka mid ah oo qamri isku haysta.
Dhibaatada haysada Soomaalidaan ayaa ah mid aad looga xumaado, iyagoo naftooda dhibaato ku haya isla markaana dhibaato ku haya umadaha kale ee ku nool Stockholm. Sababta ay dadkaan u doortan in ay ku kulmaan bartamaha magaalada oo ay qabtaan indhaha dadka kale ayaanan garanayn balse waxay cabsi weyn ku hayaan dadka kale. Hadaba su’aashu waxay tahay yaa u maqan Soomaalidaan? Waxaan ahayn dad isgargaara oo daryeesha kuweena noloshu ku adkaato balse Soomaalida Sweden ayaa u muuqata kuwa indhaha kala dabooshay oo aysan cidna u xanuunsanayn dhibaatada haysata kuweena kale.
Dadkaan nolosha ka dhacay ee ku dhibaataysan Stockholm iyo magalooyinka kale ee Sweden waxay u baahanyihiin daryeel iyo gurmad. Aaway jaaliyadihii mashruucyada been abuurka ah ku qaadan jiray Soomaali ayaan wax u qabanaynaa? Maxay mashruuc ugu qaadan la’yihiin dadkaan in ay dariiqyada ka kexeeyaan oo daryeel u sameeyaan?
Wiil Soomaali ah oo ku matagay ciyaaraha Moscow
Sweden waxay ka leexatay wadadii dhexdhexaadka
June 22, 2015 at 22:12
ILLAHAY ayaa u maqan….
Waxa wax ma tara qof naftiisa wanaag la raba lkin qof naftiisa gubayaa ILLAHAY bu leyay
June 23, 2015 at 02:01
Tan kowaad, dad qamri iyo daroogo isticmaleyaan kamadhigna inaad xaq uleedahay inaad sawir kaqaadi karto kadibna internetka so geliso bilaa amarkooda, taasina walagugu dacweyn karaa. Tan labaad, Soomalida magaaloyinka waaweyn degan sida Stockholm indhahooda weyka badatay shekadaan o kale, marka weey iska caadeysteen. Tan sadexaad, Somalidaan qamriga iyo daroogada wadada ku isticmalaya bal soo wareeso waxa kukalifay adigoo bilaa kamera ah, koleeyba sabab un baa jirto. Ramadan kariim.
June 23, 2015 at 03:35
asc horta adu somalida sweden degan wax fiicanba kama sheegtid waxaad faafisa uun xumaantooda, waa noocagan oo miran waxaa somalida niyad jabinaya, somalidu badankoodu waa dad fiican oo diintooda ku xidhan mashallah, wanaaga soomaalida sheeg xumaantooda ha faafin waayo adna waad ku niyadjabi dadkuna wey kula cooloobi. Ka hadal istället siday somalida sweden u horimari lahaayeen waayo qof kaliya oo caqli umad uu badalin kara una wanaajin kara. Dad badanba web-kaagan ku xidhan ee waano walaalaha hana niyad jabin waayo qof kastoo muslim ah oona somali mas’uul ayuu ka yahay walaalihiisa soomaaliyeed. Hadaad ceebtooda sheegteed oo sawiro ka qaado, ma waxaad moodeysa inaad wax faa’deysay?. Waar soomaaliyey is amaanaya oo wanaagina sheega waayo ilaahay uu ina sharfay oo wuxuu inagu karaameyey diintiisa islaamka ee suuban alxamdulilaah. Umadkasta wax fiican iyo wax xunba wey leedahay, ta wanaagsanba ka sareysa mar kasta ta xun. Yarkaagan qoraga ahow naftaada ku kalsoono, islaamnimadada iyo soomaalinimadaadana ku faan. Joojina xumaantan aad soomaalida 24saac aad ka qoreysa. Markaad adu isceydo dadka shisheeyana maxay ku odhan? Walaalka ceebtiisa qari adna taada ilaahay uu ku qarin inshallah.
Fikrad lala dhacay 15 0
Abdi wahid says:
Asc sxb daania hadal wanaagsan baad u sheegtay walaalkaaga jimcaali kuligeena an noqono kuwee ceebtooda asturan lahaa ha cebteena ha asturanlahaa
June 23, 2015 at 18:08
ALHA SOO HANUUNIYO,MEEL WALBA OO SOMLI JOOGTA,KUWAASNA ALAA U MAQAN ,,
Kalid muumin says:
June 24, 2015 at 02:01
Jimcaale waaku taageersanahay waa loobaahanyahay in lasheego wixii noga qaldan Somaalide waa bini Adam dad xun iyo dad wanaagsan waa leeyihiin… hadaan lasheegin wixii qaldan qaladki ayaa wanaag loomaleynaa marke Jimcaaloow waa mas uuliyad noowada taal
June 24, 2015 at 11:34
Dhawr jeer ayaan arkaa in qalad laga sheego qoraal walba uu jimcaale doo qoro balse xaqiiqda waa in lasoo bandhigaa kuwa qamriga la dhuunta si wax loogu qabto oo looga reebo ugu yaraan in loo duceeyo taasna ceeb maahan ramadan mubaarak.
Nuur guuleed says:
June 24, 2015 at 12:48
walaal aadbaan uga xumay dhibaatada aad sheegtay ee haysata dadkeena, waxaan kugulatalin lahaa in aad iska ilaaliso mardanbe sawir haka qaadin qof aan raali ka ahyn.
waxay ahyd in aad salaanto oo lahadasho oo waydiiso in ay kuuwaramaan kadibna sawirka way ogolaan lahaayeen.
hadeg degin jimcaali aad baaan kuugu mahadcelinayaa.
MArka hore sxb saxaafada dhaqankeeda waa in aad ilaalisaa,dadka marka hore waa la salamaa xitaa haddey qamri cabayan kadibne la weydiiyaa in aad wareysan karo adigoo isku sheegaayo inaad weriye tahay.haddey ka yeelan sawir maba u baahnid waayo dadkaas koley ma jeclo iney waalidkood ama walalahood arkaan ayagoo cabsan oo website ku jiro.wareysiga ayaa inooga faa’ida badnaa sawir aad soo xaday.
wiilkaan Jimcaale ah wax dhiba masheegin inloo naxo oo waxloo qabto ayuu ka hadlay waana run in aan isku naxno oo aan is caawino oo xumaanta layska reebo waa laga yaabaa qaarkood in hadii meel lagu aruuriyo oo waxaan laga dhaqo in ayshaqaysan lahaayeen laakiin aycaawin waayeen alow noo gargaar ayagana hanuuni jimcaale halkaa kawad ururada lahadal adaa yaqaane dadkaa xarun ufura haladhaho dowlada way kacaawin lahayd baan qabaa anigu oo daroogada halaga dhaqo illaahay iscaawiya oo xumaanta iska reeba ayuu na amray asa laamu caleykum
Dadka hala caawiyo caawin beey u bahanyihin hadii i la qariyo see loo caawin War kaca u istaaga wixi wax u qaban kara hadal han ma buuxshee